Mayelana NATHI - Wenzhou Charmhome Electronic Technology Co., Ltd.
Charmhomeibhizinisi eline-R & D ephelele ezimele kanye namandla okukhiqiza.Imikhiqizo yethu ifaka ukuhlanzwa ngomlomo, ukubhucungwa umzimba, ukubuyiselwa kokunyakaza nomunye umkhiqizo we-elektroniki wezempilo. Sineqembu eliqeqeshiwe lamathalenta asafufusa anolwazi lokuthuthuka olucebile nekhono eliphakeme lokuqamba, sisebenzisa ubuchwepheshe be-AI futhi sisize utshalomali olukhulu ukuze kuthuthukiswe imikhiqizo yochungechunge oluningi ngokuvikelwa okuphelele kwelungelo lobunikazi eminyakeni edlule.
I-Charmhome ivunyelwe izitifiketi, njenge-ISO9001, CE, RoHS, FDA, FCC. Njengamanje, sinemigqa eminingi yesimanje yokukhiqiza yemikhiqizo ye-elektroniki eChina. Sihlala sinamathela emcabangweni wokuphatha wabantu ogxile kubantu, ngokwesayensi nangokuqondile, ikhwalithi kuqala. Kithina, umuzwa omuhle nokuhlolwa okwengezwe ngamanani kumakhasimende ukuphishekela kwethu isiko lekhwalithi.
Njengenkampani eyandayo, iCharmhome ithuthukisa umkhiqizo wayo, futhi yamukela ukubambisana nephrojekthi ye-OEM & ODM. Silandela umqondo wokusebenzela amakhasimende ngqo, sithumele imikhiqizo yethu emazweni amaningi nge-Alibaba, i-Amazon, i-Lazada njll ngokulandela amanani wokusebenzela amakhasimende, imikhiqizo yeCharmhome iye yaziwa kabanzi ngamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe ngesikhathi esifushane.
Ithimba leCharmhome lizobambelela kumbandela wokubambisana ngobuqotho futhi liqhubekele phambili, lizame konke okusemandleni ukwenza imikhiqizo ibe yizidingo zansuku zonke zabantu abavamile.Siyakwamukela ukuhambisa inkampani yethu futhi sifune ukusebenzisana kokuwina.